मनोरञ्जन Archives - दैनिक नेपाल न्युज
काठमाडौँ २१ असोज: बालगायक प्रिन्स सिलवालको नयाँ गीत ‘सडक बत्ती हेरिहेरी पाइला उचालौँ’ को आज काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रमा छायाङ्कन गरिएको छ । ट्राफिक सचेतनाको विषयमा केन्द्रित उहाँको पाँचौँ प्रस्तुति रहेको उक्त गीत काठमाडौँको माइतीघर, बानेश्वर, शङ्खमूल, पुतलीसडकलगायत विभिन्न क्षेत्रमा छायाङ्कन गरिएको हो । गीतमा महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल र […]
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी र उनका पति विरुद्ध ठगीको आरोप लागेपछि
मुम्बई – बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी र उनका पति राज कुन्द्राविरुद्ध ठगीको आरोपमा प्रहरीमा उजुरी परेको छ। समाचारअनुसार दुवैविरुद्ध सुनको अफर प्रकरणमा एक लगानीकर्ताले ठगीको आरोप लगाउँदै प्रहरीमा उजुरी दिएका छन्। एनआरआई सचिन जोशीले खार पुलिसमा हालै शिल्पा दम्पतीविरुद्ध उजुरी दिएका हुन्। उजुरीमा शिल्पा दम्पती आबद्ध सतयुग गोल्ड प्रालिले ठगेको जोशीले आरोप लगाएका छन्।अन्नपुर्ण पोष्टमा […]
‘द कपिल शर्मा शो’ मा अभिनेता आमिर खान किन जादैनन्
एजेन्सी – चर्चित कमेडियन कपिल शर्मा सो मा नयाँ नयां गेस्ट आउने गर्दछन् । उक्त शो धेरै रुचाउने गरेका छन् । कोरोनाका कारण रोकिएको यस शो अब भने संचालन हुने तयारीमा रहेको छ । कपिल शर्मा सो मा नयाँ नयाँ चलचित्रको प्रचार प्रसार गर्नेका लागि अभनेता अभिनेत्री आउने गरेका छन् । सलमान खान देखि साहरुख […]
आकाशबाट बाकसमा नआए…
बागलुङ, २९ भदौ (रासस) : ‘आकाशबाट बाकसमा नआए ढोका खोल भन्नेछु म आए’ (पुरुष) ‘घरै धराप छ पहिरो खसेर बाली खायो सलह पसेर’ (महिला) यी शब्द लोकगायक विष्णु खत्रीको दशैँ गीत ‘रिनै रिनको’का हुन् । गीतमा प्रवासी नेपाली र तिनका आश्रित परिवारको दुःख, पीडा अभिव्यक्त छ । श्रीमान्ले दशैँमा घर आउने दिनको ठेगान छैन भन्छन् […]
निशान भट्टराईको मर्म स्पशी गीत ‘मेरो जीन्दगी’ सार्वजनिक
काठमाडौं । अति नै मर्मस्पर्शी, वास्तबिक घट्नामा आधारित गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । बैतडीका महेश अवस्थीका छोरा शिवाशं जन्मेको दुई महिनामै कलेजो फेर्नु परेपछि बुवाले कलेजो दान गरेका थिए । तिनै महान बुवाको वास्तविक घट्नामा आधारित गीत ‘मेरो जिन्दगी…’ सार्वजनिक भएको हो । अहिले सिवाशंको स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको छ, कलाकारहरूले गीतबाट आउने रोयल्टी शिवाशंको […]
क्यासरले थलीएको बेला पनि संजय दत्त काममा ब्यस्त छन्
काठमाडौ – फोक्सोको क्यान्सर भएर अस्पतालमा उपचाररत अभिनेता सञ्जय दत्त फिल्म छायांकनमा निस्कने भएका छन् ।पहिलो केमोथेरापी लिएका उनी रणवीर कपुरका साथ फिल्म ‘शमशेरा’ का लागि निस्कने तयारी गरिरहेको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । ६१ वर्षीय दत्तको उपचार मुम्बईको मोकिलाबेन अस्पतालमा डा। जलिल पारकरको रेखदेखमा भइरहेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।दत्तले डा। पारकरसँग […]
नायिका कंगनालाई ज्यान मार्ने धम्की आएपछि सरकारले दियो यस्तो सुविधा
नयाँदिल्ली, २३ भाद्र । बलिउड अभिनेत्री कंगना रनौतमाथि धम्की आएपछि उनलाई वाई प्लसु क्याटगोरीको सुरक्षा दिइएको छ । उनको सुरक्षामा १० सशस्त्र कमाण्डर तैनाथ हुनेछन् । सिफ्टका आधारमा २४सै घण्टा उनीहरुले कंगनालाई सुरक्षा दिनेछन् । ९ सेप्टेम्बरमा मुम्बइ जाँदै गरेकी कंगनालाई त्यहाँ पुग्नुभन्दा अघि नै सुरक्षा दिइएको हो । उनलाई मुम्बइ फर्कन नदिने भन्दै धम्की […]
ऐश्वर्याका यि पूर्वप्रेमी जसलाई सलमान खानले ज्यान मार्ने धम्की दिएका थिए
एजेन्सी । पूर्व सुन्दरी ऐश्वर्या राय बलिउडमा सदावहार चर्चामा रहने नायिका हुन् । सन् १९९९ मा सलमान खानसँग प्रेम रोमान्समा रहेकी उनी ३ वर्षसम्म सलमानको रोमान्समा ब्यस्त रहिन् । सलमानले ऐश्वर्यालाई अति माया गर्नुका साथै शंका पनि उत्तिकै गर्ने र पिट्नेसम्मको ब्यबहार गर्दथे । जसकारण सन् २००२ मा उनीहरूको ब्रेकअप भयो । सलमानसँग झगडा परिरहेका […]
काठमाडौँ । लोकप्रिय नायिका मलाइका अरोरालाई पनि कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ । मलाइकालाई कोरोना लागेको जानकारी उनकी बहिनी अमृताले दिइन् । मलाइकालाई अहिलेसम्म कोरोनाको कुनै लक्षण भने देखिएको छैन । कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएसँगै मलाइका होम आइसोलेसनमा बसेकी छिन् । त्यस्तै चर्चित नायक अर्जुन कपुरलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । कोरोना भाइरसको […]
नायक किशोर खतिवडाको लेखन तथा निर्देशनमा निमार्ण भएको नेपाली कथानक चलचित्र एल हाउसको छायाँकन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । शत्रुधन अन्सारी तथा राम महर्जनको निमार्ण रहेको चलचित्रमा नेपाली समाज भित्रको नालिबेलीलाई चलचित्रमा समेटिएको छ । लकडाउनको विचमा सामाजिक दुरीलाई कायम गदैँ चलचित्रको निमार्णमा जुटेको चलचित्रकी प्रस्तुतकर्ता कला राईले बताइन । दिवश गुरुङको छायाँकन , देव […]
धरान – रेडमुन इन्टरटेन्मेन्टको आयोजनामा गत वर्षको मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश नं १ स्तरीय गायन प्रतियोगिता स्टेट १ सिङगिङ आइडल २०७६ पहिलो संस्करण का विजेताहरूलाई आज बुधबार धरानस्थित ज्वाई खानाको हलमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच पुरस्कार वितरण गरिएको छ । प्रतियोगिताकी विजेता झापाकी जस्मिन बराललाई कुमार एण्ड सन्स अटो प्रा. लि. धरानको भेष्पा एण्ड अप्रिलिया सोरूम […]
काठमाडौँ, १४ साउन: पत्रकार तथा गायिका ईश्वरी बरालको ‘हरेक रात सपनीमा हुन्छु तिम्रै रानी’ बोलको लोक आधुनिक गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतकार क्षितिज समर्पणको शब्द र सङ्गीतकार राजकुमार शाहीको सङ्गीत संयोजन रहेको सो गीत एक्का कम्पनीको युट्युब च्यानलमार्फत मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको छ । सञ्जय हमालले एरेन्ज गर्नुभएको उक्त गीतको सम्पादन पनि राजकुमारले नै गर्नुभएको […]
काठमाडौँ – रोज शिप बिकाश तालिम केन्द्रको आयोजनामा काला-कोला टिकटक क्विन प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। बिगत १२ बर्ष देखि नेपालमानै सौन्दर्य सामाग्रीहरु उत्पादन गरि बिक्रि वितरण गर्दै आएको काला-कोला कम्पनिले आफ्नो ब्यापार प्रबर्धन तथा सौन्दर्यकर्मीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि काला-कोला टिकटक क्विन प्रतियोगिता आयोजना गरेको कुरा कम्पनिका अध्यक्ष चेतन गोयलले बताएका छन् । सौन्दर्य सामाग्री उत्पादन […]
ईटहरी/ महामारी स्वरुप लिदै विश्वब्यापी भएको कोरोना भाईरसका कारण जारी भएको लकडाउनले नेपाललाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्यो । जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो धक्का पुग्यो । यता मनोरञ्जन क्षेत्रमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ । नेपालमा लकडाउनको अन्त्य भएपनी मनोरञ्जनको दुनियाँ भने पुरानो हिसाबले चल्न सकेको छैन । यस्तै पेरिफेरीमा अनलाईन तथा सामाजिक संजाल […]
गुरुङ सँस्कारमा बनेको नेपाली कथानक चलचित्र ‘बारपाकी माया’ को सिक्वेल ‘बारपाकी माया २’ बन्ने भएको छ । गोरखाको बारपाक गाऊँमा सम्पूर्ण छायाँकन गरिएको चलचित्र ‘बारपाकी माया’ ले गुरुङ सँस्कारको विषयलाई उत्थान गरेको थियो ।’ बारपाक बिर चक्र भिसी गजे घलेको गाउँ हो। बारपाकमा घले र गुरुङको ठुलो बस्ति रहेको छ। लक डाउनको समयमा चलचित्रको स्क्रिप्ट […]